Ukunakekelwa kwezitamatisi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukunakekelwa kwezitamatisi
Ukukhulisa i-pepino: ukutshala nokunakekela isikhathi esihlala njalo sesihlungi
Yini i-pepino ngumbuzo onjalo, mhlawumbe, wonke umuntu uyabuza lapho ezwa leli gama. Kulesi sihloko sizokhuluma ngalesi sitshalo esithakazelisayo, futhi sithole imigomo eyisisekelo yokutshala nokukhathalela i-pepino ezweni. I-Pepino - iyini isitshalo se-Pepino, esivame ukubizwa ngokuthi i-melon pear, yisihlahla esihlala njalo esihlahleni esivela emndenini wakwa-nightshade, ovela eNingizimu Melika.
Lapho ukondla izithombo zika utamatisi nokuthi ungayenza kanjani
Inhloso yokuhlwanyela utamatisi yiqiniso, izithelo zawo, yiziphi abalimi abanaka kakhulu. Kodwa-ke, kufanele kuqondwe ukuthi ekuvuneni okuhle, okokuqala, kufanelekile ukukhula izithombo ezinhle kakhulu, ezidinga umanyolo ovame futhi ofanele. Ukubuyisela okunye kwalesi sitshalo kuyadingeka njalo njalo, ngakho-ke, ngezansi sicabangela ukuthi hlobo luni lomanyolo oludingayo ukondla utamatisi.
Indlela yokudla utamatisi, utamatisi utamatisi ngemuva kokutshala emhlabathini
Lapho ukhula utamatisi, umsebenzi oyinhloko kumgadi wensimu ukuthola izithombo eziphezulu. Kodwa-ke, ukuze uthole utamatisi omuhlaza ovela ezihlwini, kusadingeka unikeze ukunakekelwa okudingekayo, futhi ikakhulukazi ukondla njalo. Ngakho-ke, ngezansi sizokhuluma ngokuthi singondla kanjani utamatisi emva kokutshala emhlabathini, lapho ukwenza khona nokuthi kanjani.
Indlela yokutshala utamatisi ku-abamba ukushisa, futhi kungani kufanele kwenziwe
Ukuqothula utamatisi kusiza ukuthuthukisa isivuno semifino nokuyivikela ezifweni ezihlukahlukene. Kodwa ukuze inqubo ikhiqize imiphumela elindelekile, umuntu udinga ukwazi ukuthi uzokwenza kanjani le nqubo ngesikhathi futhi kanjani ukuze ahlinzeke izitshalo ngezakhi ezidingekayo. Indlela yokufaka utamatisi ku-greenhouse, sizobe sitshela kabanzi.
Imvubelo njengomanyolo wezitamatisi
Imvubelo iyinto ejwayelekile yomkhiqizo wokudla kwethu. Sidla njalo emzimbeni wezinkwa, isinkwa, i-kvass, kanye nezinye izinto eziningi zokudla. Eqinisweni, ubusika kukhona izifungi ezicebile amaprotheni, i-iron, macro- kanye nama-microelements nama-amino acids. Uyazi? Imvubelo iyimithombo enhle kakhulu yamabhaktheriya amaningi angokwemvelo angakwazi ukusheshisa ukuthuthukiswa kwezitshalo futhi ivuselele imvelo yengculazi yabo.
"Lazurite": imiyalelo yokusetshenziswa kwesidakamizwa sokhula
Amakhemikhali, awaziwa ngokuthi yi-herbicides, abantu babuthele ngokwanele ukubhubhisa zonke izimila emhlabeni. Lokhu kugcizelela kuphela isidingo sokusingatha ngokucophelela lezi zinxusa lapho usebenzisa. Ekusebenzeni kwezolimo, kusetshenziselwa izinyathelo zokukhetha ezikhethiwe, ezikuvumela ukuba usebenze ngokuphumelelayo nenani elikhulu lokhula.
Indlela yokutshala utamatisi, usebenzisa indlela kaTerekhin
Abalimi abaningi kanye nabalimi abavame ukuhlola izindlela ezintsha zokulima izitshalo ezithile, ngakho akumangazi ukuthi ukutshala utamatisi ngendlela kaTerekhina kwamukelwa kabanzi. Kumele kuqashelwe ukuthi kunemibono ehlukene ngale ndaba, kanti ngenkathi abanye balimi beyadumisa indlela futhi babone imiphumela emihle yokusetshenziswa kwayo, abanye bayazibuza ukuthi yini ekhethekile kangaka ngalolu buchwepheshe.
Indlela yokuphatha kahle utamatisi emhlabathini ovulekile
Utamatisi abhekwa njengezitshalo ezingenakuzithoba ezingazala izithelo ngisho nangaphandle kokunakekelwa okufanele kumnikazi. Kodwa-ke, kukhona "kodwa" - ukunikeza isivuno esiphezulu kungaba kuphela lezo zitshalo, okwakukhona ukunakekelwa okufanele. Futhi utamatisi udinga konke ngokulinganisela - okwanele ukuthuthukiswa okujwayelekile kokunisela nokufaka umquba.
Ukufafaza utamatisi nge-boric acid: kanjani futhi kungani ukucubungula utamatisi
Ukuze ukhule utamatisi ku-cottage yakho yasehlobo, akudingekile ukuba uchithe isikhathi esiningi kuso. Ngokuba izithombo eziphezulu, kwanele ukuthenga imbewu, futhi ngokunakekelwa okufanele, ngenxa yalokho, uzothola isivuno esicebile. Ake sibone ukuthi ikhambi le-boron lisetshenziselwa izitshalo. Ngokungangabazeki, ukufafaza imbali kuyovikela izithelo ezifweni ezihlukahlukene.
Imiyalo yokusetshenziswa kwesidakamizwa "i-Bitoxibacillin"
Njengaziphi izilwane eziphilayo, isitshalo singagula futhi sidinga ukwelashwa. Izifo ezihlukahlukene zingabangela amagciwane, isikhunta nezinambuzane. Kunezinambuzane eziningi ezithandayo ukudla izitshalo. Abanye bakhetha izimpande, amanye amaqabunga neziqu. Abanye ongabona, kanti abanye abatholakali.
Ukunambitha utamatisi ebusweni bokushisa, ukuthola isivuno esikhulu sotamatisi
Ukutshala utamatisi ku-abamba ukushisa, ungagcwalisa ukuvuthwa kwangaphambilini, futhi unciphise ingozi yokufa kwezitshalo kusuka eziqhumeni nasezifo ezifubeni. Kodwa-ke, ngisho nokutshala imifino esitsheni sokushisa kudinga izinyathelo zokwenza izimo ezinhle kakhulu. Ukunambitheka utamatisi ku-greenhouse kuyindlela edingekayo yokusheshisa inqubo yokuvuthwa isitshalo nokwandisa ubungako bayo.
Kungenzeka yini ukukhula utamatisi ngaphandle kokuchelela
E-intanethi kunezinhlobo eziningi zezindlela zokutshala utamatisi. Wonke umlimi wemifino we-amateur ufuna ukuthola indlela ezoletha isivuno esiphezulu emazindeni aphansi kakhulu. Eminyakeni yamuva, abaningi bakhuthaza ukutshala utamatisi ngaphandle kokuchelela. Ake sibone ukuthi le ndlela iyini.
Izembatho ezinhle kakhulu zezithombo zika utamatisi kanye nepelepele
Utamatisi kanye nopelepele ziphakathi kwezitshalo ezithandwayo kakhulu zensimu, ezingatholakala cishe kuzo zonke izindawo. Ziyinkanuko futhi zinenani lamavithamini adingekayo ngomzimba wethu. Ukuze uthole isivuno esicebile nekhwalithi ephezulu yalezi zitshalo, kubalulekile hhayi nje ukutshala kahle, kepha ukutshala izithombo kahle.
Kunganjani nokuthi kungani ubopha utamatisi ku-greenhouse polycarbonate
Utamatisi, lesi sithelo esivamile saseNingizimu Melika, sithandwa ngesizathu esihle. Akugcini nje kuphela egcwele izakhi ezincane nezinzuzo zama-macro, amavithamini nama-antioxidants, kodwa futhi "isusa" i-thrombosis, ukuvinjelwa kwamathumbu emathunjini kanye nemivimbo ye-varicose, iyasiza ohlelweni lwezinhliziyo futhi luqinisa isimiso somzimba. Kodwa uma ucabanga ngemibhede yakho yamatamatisi, kufanele ukhumbule ngokuziqhenya kwabo.
Kanjani nokuthi kungani ubopha utamatisi emhlabathini ovulekile
Ngokuvamile bonke abalimi abavame ukutshala izitshalo ezihlukahlukene ezakhiweni zabo zensimu bahlale bebeka umbhede wemifino yendabuko - utamatisi. Lokhu akumangalisi, ngoba ukutshala lezi zithelo ngokuzimela kuyathandeka kakhulu. Izinhlobo zihluke kakhulu - zombili zizinzile futhi zide. Endaweni yethu yokutshala ilawulwa yizitshalo ezinkulu zamatamatisi, ezinika izithelo ezinkulu.
Ngaki kaningi ukuphuza utamatisi ku-abamba ukushisa ukuthola isivuno esihle
Lapho ukhula utamatisi ezindaweni zokugcina izithombo, ukuchelela kungenye yezindlela ezibaluleke kakhulu ze-agronomic. Kungakhathaliseki ukuthi utshala izitshalo zemifino ngendlela efanele ukuthi ukukhula kwabo okuhle nokuvuna okuhle kuncike. Ngokusekelwe kokubheka, abalimi bahlakulela izincomo eziningi nokuthi zingcono kanjani ukuphuza utamatisi ku-greenhouse, futhi yiliphi izinga lomswakama oludingekayo ekukhuleni kwabo okujwayelekile.
Umanyolo wezotamatisi ku-greenhouse: ngesikhathi sokutshala nasemuva kokutshala
Ukutshala utamatisi ebusweni bokushisa, sifuna ukuthola isivuno esikhulu futhi ngesikhathi esifanayo ukulinganisa izindleko zokulima. Abalimi abaningi be-novice, bethenga izinhlobo ezincane kakhulu zokukhiqiza, bakhohlwe ukuthi imifino nezinhlobonhlobo ezinezivuno eziphakeme zidinga ukudala izimo ezinhle lapho ukudla okufika ngesikhathi kudlala indima ebalulekile.
Indlela yokudla utamatisi ngesikhatsi fruiting?
Ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi imifino emihle yokuvuna idinga usizo oluncane. Isibonelo, lapho utamatisi uqala ukuthela izithelo, zingadinga ukondliwa okungeziwe: uma inhlabathi isiphelile, utamatisi sekhulile kusayithi iminyaka eminingi noma ukuphathwa okufanayo akukwenziwanga kusengaphambili.
Iodine for utamatisi: sebenzisa ku abamba ukushisa futhi ensimini
Yonke insimu ifuna ukuthola isivuno esicebile kuye, kuyilapho ukunciphisa inani le-nitrate elisetshenzisiwe. Kwabanye, kuyindaba nje yokuqhosha, kuyilapho abanye nje bengathandi ukunikeza izingane zabo izithelo nemifino ekhuliswe nezibulala-zinambuzane. Kulesi sihloko sizochaza ukuthi singamanzi kanjani utamatisi nge-iodine.
Indlela yokwenza utamatisi obusika (khipha izinyathelo ezinganeni) emhlabathini ovulekile
Ukukhonza kungenye yezinyathelo ezizosiza ukwandisa isivuno sotamatisi futhi wenze izithelo zikhudlwana futhi zibe nemfucuza. Akekho umgadi wensimu ongakwenza ngaphandle kwawo. Iyini le nqubo nokuthi ungayenza kanjani - zama ukuyihlola. Kungani utamatisi omncane we-Pasony - lokhu kuqeda isitshalo sesitshalo kusuka emahlumela amancane akhula phakathi kwezinto ezimbili eziyinhloko.
Ama-dahlias angama-7 anamuhla ahlukahlukene, lapho omakhelwane bakho bezobe bampunga khona ngomona
Izindawo zokwelapha kanye nokusetshenziswa kwemifino
Ama-rose e-Shrub: incazelo yezinhlobo, izinhlobo, izici zokunakekelwa
Incazelo yebhali kanye nokutshala
Okuqukethwe kwezilwane ekhaya
IViett yegolide yamaSkithe - incazelo yezinhlobonhlobo zezimbali ezifuywayo
Kungani amaqabunga e-hydrangea ephenduka ebomvu - ukuthi enzeni ngesitshalo
Umuthi we-Beech: izici, isicelo, izindawo